Fanampiana fianakaviana zandary maty :: Mitentina 30 tapitrisa ariary ny vola nomena ireo vady aman-janany • AoRaha
Fanampiana fianakaviana zandary maty Mitentina 30 tapitrisa ariary ny vola nomena ireo vady aman-janany
Ankoatra ny fanomezana laharam-boninahitra ambony sy ny mariboninahi-pirenena « Chevalier de l’ordre national” an’ilay lehiben’ny Zandarimaria tany Befandriana Avaratra izay namoy ny ainy, afak’omaly, vokatry ny fifandonana tamin’ny jiolahy dia nahazo ny anjarany ihany koa ireo vady aman-janany, teny Betongolo, omaly. Mitentina 30 tapitrisa ariary ny vola nomen’ny Zandarimaria azy ireo.
“Maherifon’ny firenena io zandary io satria tanteraka taminy tokoa ny hoe Zandarimaria miaro ny olona sy ny fananany. Omena azy avokoa izay zony rehetra, toy ny fampiakarana galona sy ny fanomezana mari-boninahitra. Ireo zanany roa vavy sy ny vadiny kosa tsy hojeren’ny Zandarimaria fotsiny fa omena ny zony. Ankoatra izay, raha tsy manana asa ny vadiny dia afaka miditra mpiasa sivily ato amin’ny Zandarimaria. Ireo zanany ihany koa raha manana fahasahiranana dia afaka raisin’ny Zandarimaria manontolo, ka apetraka any amin’ny toby fitaizana zaza kamboty an’ny Zandarimaria any Arivonimamo”, hoy ny jeneraly Ravalomanana Richard, Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria, teny Betongolo teo am-panaovana veloma farany ny vatana mangatsiakan’ilay lehiben’ny Zandarimaria namoy ny ainy, omaly.
Nisaotra ireo fanampiana sy fandraisana an-tanana nataon’ny fanjakana tamin’io namoy ny ainy io ny solontenam-pianakaviana. “Tsapanay ary hitanay fa tena nanao ny fanjakana sy ny zandarimaria, saingy izao moa no anjara ka tsy misy azo atao afa-tsy ny manaiky”, hoy izy ireo.
Famelabelarana momba ny soratra :: Antsoina handray anjara ireo mpahay sy mpampiasa ny Teny malagasy
Kitra – Lalao afrikanina isan-tarika :: Mailo amin’ny klioba maorisianina ny Fosa Junior